Yealink UVC20, namana tsara amin'ny fifandraisan-davitra [Famerenana] | Vaovao momba ny gadget
Yealink UVC20, namana tsara amin'ny fifandraisan-davitra [Famerenana]
Miguel Hernandez | 08/06/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 29/05/2021 13:57 | Gadgets, General, hevitra
Tonga ny teleworking ary toa hijanona izany. Mihamaro hatrany ny kaonferansa, fampisehoana na fivoriana izay ataonay amin'ny alàlan'ny telefaona amin'ny alàlan'ny Teams, Skype, Zoom na izay safidy hafa hita eny an-tsena. Na izany aza, ao anatin'ireny fotoana ireny no nahatsapantsika fa angamba tsy dia tsara loatra ny webcam sy ny mikrôfônan'ny solosainao ...
Ilaina ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fakantsarintsika sy ny mikrônintsika raha te hahazo valiny tsara isika, ary noho izany dia manana vahaolana manan-tsaina isika. Izahay dia mijery lalina ny webcam Yealink's UVC20, namana tonga lafatra amin'ny fivorian'ny Microsoft Teams sy ny maro hafa.
3 Mampiasà traikefa
Amin'ity tranga ity, na eo aza ny fahatsapana fa ny fonosana, ny tena izy dia ny vokatra azo tsara. Vita amin'ny plastika saika tanteraka, manana takelaka vera / methacrylate eo anoloana iray manontolo isika izay manome azy fahatsapana faran'izay tsara. Ny sensor eo amin'ny tapany eo aloha dia manana ny lazany rehetra raha ny lavaka mikrona kosa dia eo amin'ny ilany ankavanana sy eo ankavia ny LED manondro ny toeran'ny fitaovana. Manohy farafaharatsiny farafaharatsiny izahay miaraka amin'ny rafitra fanidiana masinina feno izay mamela antsika hanana fiainana manokana.
Fatra: 100mm x 43mm x 41mm
Amin'ny lafiny iray, manana fototra miaraka amina rafitra hinge isika izay mahatonga ity fakantsary ity ho rafitra iray manerantany ary azo alaina ho an'ny mpanara-maso sy solosaina finday rehetra, na dia irintsika aza ny manararaotra ny kofehy manerantany ho an'ny tripod eo amin'ny fotony, na mankafy azy rafitra mamela antsika hamela azy mivantana eo ambony latabatra. Betsaka ny fomba hafa atolotray antsika, indrindra raha jerentsika fa ny fakantsary dia afaka mihodina irery na mitsangana na mitsivalana. Fifanarahana amina sainam-pirenena amin'ity webcam ity miaraka amina mikrô natsangana.
Hankafy webcam amin'ny alàlan'ity Yealink UVC20 ity isika izay manolotra elanelam-pokonolona eo anelanelan'ny 10 sentimetatra sy 1,5 metatra. Manana tariby any aoriana izahay USB 2.0 2,8 metatra izay ho mihoatra ny ampy ho an'ny toerana rehetra. Na izany aza, tonga ny fotoana hifantohana amin'ny sensor anao, manana maodely izahay 5 MP CMOS miaraka amina f / 2.0 aperture izay afaka manolotra ny fivoahan'ny horonantsary amin'ny famahana 1080p FHD amin'ny 30FPS ho fahaiza-manao lehibe indrindra. Ho an'ny valiny mahomby dia manana autofocus izy izay miasa tsara sy mandroso hatrany amin'ny fifanoherana sy ny famirapiratana.
Ny fitaovana dia hifanaraka amin'ny Windows sy macOS tsy misy olana. Ho an'ny ampahany, ny mikrô dia omni-directional ary hanana SNR farafahakeliny 39 dB. Ny refin'ny valiny, eny, somary tery eo anelanelan'ny 100 Hz sy 12 kHZ, valiny mitahiry. Tsy nahita olana tamin'ny fahaiza-manao ara-teknika izahay, raha ny tena izy dia nilaza izahay fa gaga izahay tamin'ny fahaizan'ny Yealink UVC20 manolotra vokatra tsara na dia misy aza ny olan'ny jiro mazava eo amin'ny sehatry ny fisamborana.
Ny fakantsary dia manana rafitra plug-and-play tanteraka, Midika izany fa tsy mila manao karazana fikirakirana alohan'ny hampiasana azy isika, ny tsy fananantsika rindrambaiko azo sintomina akory noho io antony io dia manamarina izany. Raha vantany vao ampifandraisintsika amin'ny alàlan'ny port USB ny fakantsary Yealink UVC20 dia hitantsika eo amin'ireo loharanom-peo sy horonan-tsary izany rehefa miantso video isika amin'ny alàlan'ny fandaharana isan-karazany amin'izany. Amin'ity tranga ity dia samy hahita samy izy ny fakan-tsary sy ny mikrôfen'ilay fakantsary, ahafahantsika mampiasa ny mikrôfony manokana raha irintsika.
Vao tsy ela akory izay no nampiasainay ny fakantsary hanoratana Podcast isan-kerinandro an'ireo mpiara-miasa aminay iPhone ankehitriny ary afaka jerenao amin'ny horonantsary tafiditra. Ity no fomba mety indrindra hijerena ny fahombiazan'ny fakan-tsary amin'ny ankapobeny, na dia eny aza, amin'ity tranga ity dia nampiasa loharano feo hafa izahay. Ny fakan-tsary dia manana autofocus somary haingana, izay nanaitra ahy na dia tsy dia tsara aza ny tarehin-jiro, ary ity dia iray amin'ireo teboka manandanja indrindra, ny fisian'ny autofocus dia ahafahantsika mivezivezy eo alohany nefa tsy mijaly amin'ny ireo teny ireo.
Tsy dia mora loatra ny fakantsary, ary ny olana lehibe sendra ahy dia ny tsy tanisaina azy io ho toy ny vokatra azo any Amazon. Afaka mahazo izany ianao amin'ny tranokala toa Onedirect amin'ny vidiny natolotra 89,95 euro, Raha heverina fa vokatra voamarina ho an'ny Microsoft Teams sy Zoom io dia toa tsy dia be loatra.
Ny fahombiazana dia ny andrasan'ny olona amin'ny vokatra misy ireo toetra ireo, toy izany koa ny fahaizan'ny toetrany sy ny fampivoarana ny fifantohana mandeha ho azy mandritra ny antso an-tsary rehetra, tsy misy isalasalana vokatra azonay atolotra raha mitady hanatsara ny famelabelaranao ianao.
Navoaka tamin'ny: 8 junio 2021
Fanovana farany: May 29 amin'ny 2021
Fanamboarana / fampiasana
Volavola sy fitaovana izay mahatsapa "premium"
Fototra tena be mpampiasa sy mora ampiasaina
Vokatra tena tsara amin'ny fakantsary sy ny autofocus
Malahelo adaptatera USB-C aho
Vitsy kely ny teboka amidy any Espana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Yealink UVC20, namana tsara amin'ny fifandraisan-davitra [Famerenana]
Ny kambana ANC, Fresh´n Rebel dia mivoatra ny maodelin'ny fahombiazany
Hoover H-Purifier 700, famerenana ity fanadiovan-drivotra lehibe ity